सहकारीको कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार - Everest Dainik - News from Nepal
सहकारीको कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार
काठमाडौंः सरकारले सहकारीको लेखांकन मापदण्ड तयार गरेको छ। सहकारीको कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न लेखा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको हो। सहकारीको कारोबारको अभिलेखीकरण, प्रस्तुति र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड जारी गरेको छ।
याे पनि पढ्नुस सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले बिहीबार बिदा हुन्छ त? सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेन
सहकारी विभागका अनुसार देशभर सहकारीको संख्या करिब ३५ हजार छ। सहकारीले सात खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, दूरदर्शिता तथा जवाफदेहिता हराउँदै गएको छ। यस्ता विषय समेट्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारीमा लेखा, नीति, चार्ट अफ एकाउन्ट लेखामान जस्ता आवश्यक वित्तीय औजारको पालना गराउन सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको लेखा मापदण्डले सहकारीमा पारदर्शिता ल्याउन सघाउने बताए। ‘सहकारीमा लेखामान मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने क्रम जारी छ’,उनले भने,‘यसले सहकारीलाई सुशासनमा हिँड्न सिकाउनेछ। ’ लेखा मापदण्डले सहकारीप्रति विश्वसनियता सुनिश्चित गर्छ। सहकारीको लेखामानमा एकरुपता नहुँदा अधिकांश सहकारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ।
याे पनि पढ्नुस सरकारले बजेट दिँदा पनि प्रहरीको रासनभत्ता बढेन !
मन्त्रालयले सहकारी विभाग, सबै प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, र अन्य विषयगत संघलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। सहकारी क्षेत्रको सुशासनलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले यस्ता व्यवस्था लागू गरिएको रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए। सुशासनका लागि सहकारी संस्थामा वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता र सुदृढ वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता र कर्मचारीको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अब सहकारीले लेखामानको मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सहकारीले लेखा नीतिसँगै वित्तीय स्थितिको विवरण, कार्य संचालनको विवरण, नगद प्रवाहको विवरणलगायत अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ। सहकारीले लेखामान राख्दा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित नगद, बैंक मौज्दात, लगानी, ऋण लगानी, अन्य चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति र अन्य दीर्घकालीन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दायित्वसँग सम्बन्धित सेयर, कोष, बचत, निक्षेप, पुँजीगत अनुदान, चालु दायित्व र दीर्घकालीन दायित्वलगायत विवरण खुलाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट
ट्याग्स: लेखांकन मापदण्ड, सरकार, सहकारी